Madaxweyne Siilaanyo Oo hubaal ah uma baahna barasho sida ay tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ee barnaamijka fanka si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah wax soo saarka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user waxaa kaliya mana dayacna ee dunida ee madadaalo laakiin taariikhqorihii screen ugu wanaagsan waxaa sidoo kale gundhig gudahood ah si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab tahay in loo isticmaali karo si loo hubiyo in wax soo saarka wanaagsan ee ahbaa arrintan la xiriira. Tutorial waa dhan oo ku saabsan sida ugu fiican video iyo daaha taariikhqorihii iyo talooyin la xiriira in ay tahay in la ansixiyay.
Maxaad taariikhqorihii Madaxweyne Siilaanyo Oo 360?
Top 5 Talooyinka Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 taariikhqorihii screen
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka qalab tahay in waxa taageeray xoogga Microsoft oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka waxaa lagu qeexaa ah si aad u hesho natiijooyinka ku jira line shuruudaha iyo user wuxuu sidoo kale hubin karaa in in isbeddellada ugu dambeeyey gudahood warshadaha ciyaaraha ayaa waxaa sidoo kale raacay. Taariikhqorihii screen Tan waxay ka timaaddaa oo waayo-aragnimo ah oo uu soo isticmaalay si ay u abuuraan oo sabab la mid ah waa a waa in ay haystaan ​​oo dhan oo isagana ka.
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 Talooyin in ay yihiin in lagu dabaqo si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xidhiidha diinta ah:
1. tacsiyeeyaan doorashada
The fursadaha barnaamijka ogolaan user si loo hubiyo in Console la soo xulay oo user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab ka tahay doorashada oo uu soo gundhig gudahood. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la horumariyo iyo qabashada shaashadda ayaa Ben qaaday waa waafaqsan shuruudaha user. Waxa kale oo hubin doona in user sidoo kale uu helo wax soo saarka ugu fiican ee la xiriirta isticmaalka barnaamijka iyo sida ugu fiican ayaa u dhiibay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Si wanaagsan u isticmaasho barnaamijka waxaa sidoo kale in la xuso in hago oo uu soo bixi leh barnaamijka ayaa sidoo kale lala tashado,
User ayaa sidoo kale hubin karaa in in profile ah ayaa loo abuuray iyo tan ayaa sidoo kale e lagala soo bixi karaa si loo hubiyo in xogta ee Console ayaa badbaadiyey in ay meel ammaan ah. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in sabab kasta haddii khasaaraha xogta ka dibna la sameeyo gurmad ah ayaa loo abuuray si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah farsamooyinka tahay waxaa qaatay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in profile la soo bixi oo u sugan meel nabad ah si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid ay kagacan iyo habkaani barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si sahlan weyn oo ku qanacsan tahay:
3. goobaha tacsiyeeyaan
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in goobaha Console waxaa lagu heli si aad u hubiso in ay la safan sida shuruudaha ka mid ah user iyo Console iyo qabashada screen shaqeynayaan la xiriira waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo waliba. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka fanka la qaatay whilr configuring guddiga.
4. Habaynta Guud
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in goobaha guud ee Console ayaa waxaa sidoo kale loo qaybiyay si waafaqsan shuruudaha qofka si natiijada ugu wanaagsan ahbaa fudayd iyo qanacsanaanta jidaynayey user in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah isticmaalka tahay oo ka mid ah barnaamijka arrintan la xiriira:
Qaabeynta 5. Game DVR
User ayaa reserved kartaa DVR ciyaarta si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helay ee la xiriirta duubo shaashadda. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in duubo shaashadda in la sameeyo waa in line shuruudaha ka mid ah user iyo arrin guud iyo dhibaatada la xaliyey marka ay timaado casters screen dhaqanka:
Wondershare Video Convertor Ultimate waa tan ugu fiican oo gobolka Jochen taariikhqorihii convertor tahay shaashadda taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo Eray guud ee barnaamijka waa sidoo kale oo waafaqsan shuruudaha nidaamka in user a doonayo in la raaco. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in HD iyo technology 4K sidoo kale loo isticmaalaa in lagu soo gudahood. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka ee downloader video oo taariikhqorihii ahaa waxaa sidoo kale qaatay sidii loo rakibay barnaamijka ugu muhiimsan oo ma u leeyihiin in ay si gooni gooni ah la bixi.
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyada oo xarunta warbaahinta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ay u baahan tahay in la hubiyo in waayo-aragnimo u geeyo xuduud lahayn ayaa sidoo kale ahbaa.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay in la hubiyo in taageero 150+ qaab la riyaaqay fudayd iyo qanacsanaanta. Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka.
Eray ugu fiican iyo guud ahaan in ay la gundhig qaab ee DVD convertor sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si ay u badbaadin tayada barnaamijka iyo in la hubiyo in lacagta kaashka ah marna ku qaatay arrintan.
Taageerada ganacsiga ee barnaamijka waa laga cabsado oo waxay u saamaxdaa user si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa la socda si aad u hesho shaqada lagu sameeyey qaab iyo fasalka.
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo version tijaabo ah iyo duluc this sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira inta iibka dambays ah laga gaaraayo ah.
> Resource > Video > Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan Madaxweyne Siilaanyo oo taariikhqorihii 360 screen